Sonto 18 Julayi 2021
Ukwakheka Kwe-Ui Le projekthi yakhelwe abantu abafuna ukuhlobisa iselula yabo ngesihloko se-Moulin Rouge yize bengakaze bavakashele eMoulin Rouge eParis. Inhloso enkulu ukunikela ngolwazi oluthuthukisiwe lwedijithali futhi zonke izici zokuklama ukubona ngeso lengqondo isimo seMoulin Rouge. Abathengi bangenza ngokwezifiso i-design esethiwe kanye nezimpawu kuzintandokazi zabo empompini elula esikrinini.
Mgqibelo 17 Julayi 2021
Lwesihlanu 16 Julayi 2021
Indawo Yokuhlala Kuyo yonke indlu kwakusetshenziswa umqondo olula kepha onobuhlakani obusezingeni eliphezulu nombala. Izindonga ezimhlophe, phansi kwe-oki yokhuni kanye ne-Limestone yendawo yezindawo zokugezela kanye nama-chimves. Ukuchazwa kahle okwenziwe ngobuciko kwakha isimo sokunethezeka okubucayi. I-vistas eyenziwe kahle inquma indawo yokuhlala yamahhala enomzimba ongu-L.
Lwesine 15 Julayi 2021
Ukufakwa I-Linear Flora iphefumulelwe inombolo "emithathu" evela ku-bougainvillea, imbali yePingtung County. Ngaphandle kwamaphalishi amathathu we-bougainvillea abonwe ngaphansi komsebenzi wobuciko, ukuhlukahluka nokuphindaphindeka kathathu kungabonakala ezicini ezihlukile. Ukugubha iminyaka engama-30 yoMkhosi Wokukhanya KwaseTaiwan, umdwebi we-Lighting design uRay Teng Pai wamenywa nguMnyango Wezindaba Zamasiko ePingtung County ukuthi enze ilambu elingahambisani, inhlanganisela eyingqayizivele yefomu nobuchwepheshe, ethumela umyalezo wokuguqula amagugu omkhosi futhi uyixhuma nekusasa.
Lwesithathu 14 Julayi 2021
Ukukhanya Okuphakathi I-25 Nano iyithuluzi elikhanyayo lobuciko ukumelela i-ephemeral nokuhlala unomphela, ukuzalwa nokufa. Ukusebenzisana ne-Spring Pool Glass Industrial CO., LTD, enombono wayo wokwakha kabusha ingilazi yehlelela ikusasa eliqhubekayo, u-25 uNano wakhetha i-bubble ethambile njengophakathi ngokuhlukile nengilazi eqinile yokuhlanganisa umbono. Kulesi sisetshenziswa, ukukhanya okukhanyayo ngemijikelezo yokuphila ye-bubble, ukufaka umbala ofana nomnyama nemithunzi emvelweni, ukudala umoya ophuphumayo ozungeze umsebenzisi.
Lwesibili 13 Julayi 2021
Umsebenzi Wokukhanya Indlela yokugoba ishubhu ye-Linear Light isetshenziselwa kakhulu ukukhiqiza izingxenye zezimoto. Umugqa we-fluid angular uqondwa ngokulawulwa okuqondile komkhiqizi waseTaiwan, ngakho-ke babe nezinto ezisezingeni eliphansi zokwakha i-Linear Light light-weight, solid, futhi iyaphatheka; ekahle ukukhanyisa noma iyiphi ingaphakathi lesimanje. Isebenza ngaphandle kwe-flicker-free touch dimming chips ze-LED, ngomsebenzi wokukhumbula ovula ivolumu esethiwe yangaphambilini. I-Linear Task yakhelwe ukuthi ihlanganiswe kalula ngumsebenzisi, yakhiwa ngezinto ezingewona ezinobuthi futhi iza nokufakelwa okuyisicaba; ukwenza konke okusemandleni ukunciphisa umthelela wezemvelo.
Calendar 2014 “Farm” Ikhalenda Lwesihlanu 22 Okthoba
Calendar 2014 “Town” Ikhalenda Lwesine 21 Okthoba
Artificial Topography I-Topography Yokufakelwa Lwesithathu 20 Okthoba
Ukwakheka Kwe-Ui Isikole Samazwe Omhlaba Indawo Yokuhlala Ukufakwa Ukukhanya Okuphakathi Umsebenzi Wokukhanya